Wasaaradda Amniga ee Puntland oo ka digtey shirar siyaasadeed? • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Wasaaradda Amniga ee Puntland oo ka digtey shirar siyaasadeed?
Wasaaradda Amniga ee Puntland oo ka digtey shirar siyaasadeed?
September 10, 2017 - By: HORSEED STAFF
Wasiirka Amniga Puntland Col Axmed Dowlad
Wasaaradda Amniga ee Puntland ayaa soo saartey amar mamnuuc ka dhigaya in shirar siyaasadeed ay isugu imaan karaan bulshada ku dhaqan Puntland.
Goaa’naka ka soo baxay Wasaaradda Amaniga oo uu ku saxiixan yahay Wasiirka Amniga Axmed Cabdullaahi Yusuf (Dowlad) ayaa digniin loo diray Hoteelada iyo goobaha kale ee ganacsi ee marti geliya shirar suyaasadeed ee looga soo horjeedo maamulka talada haya ee Dr. Cabdiweli Gaas.
Iyadoo maalmahan la qabanaayey shirar qarsoodi ah oo lid ku ah xasiloonida iyo nabadgelyada shacabka Puntland, waxaa la farayaa dhammaan laamaha ay warqaddani sida tooska ah ugu socoto in aan la qaban karin wax shir siyaasadeed ah oo lagu khalkhal gelinaayo amniga iyo xasilinta Puntland, Wasaaradda Amniga ee Puntland
Amarkan ayaa daba socda kaidb markii siyaasiyiin uu kamid yhaya Wasiirkii hore ee Caafimaadka Puntland Dr. Cabdiraxmaan Siciid Dhegaweyne ay qabteen shir ay si weyn ugu dhaliileen maamulka Cabdiweli Gaas.
Qoraalka Wasaaradda Amniga waxaa lagu koobay shirar siyaasadeed, waxaana sifo looga dhigey kuwo lagu khalkhal gelinaayo amniga Puntland, qoraalka laguma xusin in wixii shirar siyaasadeed ah la soo ogeysiiyo maamulku, ma muuqato wax lagu kala saari karo shirar siyaasadeed oo maamulka loogu cabanayo laguna dhaliilayo iyo kuwo lagu duminaayo Puntland waxa u dhexeeya ee maamulku yaqaan, waxaana guud ahaanba laga dhigey kuwo lagu khalkhal gelinaayo amniga waxaana amar la siiyey ciidanku in ay shaqo ka qabtaan.
Waa markii u horeysey ee maamulka Cabdiweli Gaas soo saaro wareegto caynkan oo kale ah. Maamulka Puntland ayaa lagu yaqaanaa sanadka u danbeeya xiliyadiisa in uu la daala dhaco duufaano mucaaradnimo, markaas oo ay ku xadgudbaan xuquuqda dastuurku siinaayo shacabka ee ah in ay sameyn karaan isu imaatin, mudaaharaad iyo weliba qoraalo ay ku dhaliili karaan maamulka markaas jira.
Amaradda caynkan oo kale ah waxay ahaayeen kuwo horey loo soo tijaabiyey, waxaana laga dhaxley, in maamulka iyo shacabku is eersadaan ayna meesha ka baxdo kala danbeyntii
Cabashada ay qabaan dadka shacabka ah ayaan ku ekeyn siyaasadda oo keliya, waxaa dalka ka jira sicir barar iyo diidmada lacagta Soomaaliga, waxaana markii u horeysey Puntland ka dhacdey qof haysta lacag shilin Soomaali ah in uu gaajo uga seexdo.
In badan oo shacabka kamid ah ayaa sheegaya in ay habboon tahay in meel looga soo wada jeesto cid kasta oo ka shaqeyneysa duminta iyo waxyeelada Puntland, halka ay maamulka ugu baaqeen in uu dhegaysto talooyinka shacabka, oo aanu ku xadgudbin xuquuqda dastuuriga ah.